लन्डनबाट भारतीय काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले नेपाल सम्झदै नरेन्द्र मोदी माथि लगाए यति ठुलो आरोप ! || सुनौलो नेपाल
लन्डनबाट भारतीय काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले नेपाल सम्झदै नरेन्द्र मोदी माथि लगाए यति ठुलो आरोप !
भारतको प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले भारत सरकारको नेपालसहित अन्य छिमेकी देशहरुसँगको नीति असफल भएको बताएका छन्।
युरोप भ्रमणमा रहेका गान्धीले बेलायतमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारत सरकारको विदेश नीति तदर्थवादमा चलेको दावी गरे। यसका लागि उनले नेपाल, श्रीलंका र अफगानिस्तानसँग भारतको सम्बन्धको उदाहरण दिए।
‘मोदी नेपाल जान्छन् र एउटा कुरा भन्छन्, फर्केपछि अर्कै कुरा गर्छन्’, गान्धीले थपे, ‘न श्रीलंकासँगको सम्बन्ध राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छन्, न त अफगानिस्तानसँग। चीनसँग पनि उस्तै समस्या छ।’
छिमेकी मुलुकसँग विश्वासयोग्य समझदारीका लागि आफूले पनि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव उनले मोदीलाई दिए।
खासमा अहिले विदेश नीतिमा रणनीतिकै अभाव छ, छिमेकी देशहरुसँग हामी साझेदारीमा जानु पर्छ’, छिमेकीसँग कस्तो साझेदारी भन्ने नखुलाएका गान्धीले भने, ‘तर अहिलेको सरकारले विभिन्न देशसँगको साझेदारीलाई झन् तोड्दै लगेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले अर्को मुलुकसँग गर्ने वार्ता देशको तर्फबाट गरिने वार्ता हो भन्दै गान्धीले भने, ‘त्यो संस्थागत संयन्त्रको सम्मान गर्न सकिएन भने राम्रो काम गर्न सकिँदैन।’
प्रधानमन्त्री मोदीले विदेश मन्त्रालयबाट ‘फिडब्याक’ लिने नगरेको बताउँदै गान्धीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भिसा सम्बन्धी काम गरेर बस्नु परेको दावी गरे।
आइत, भदौ १०, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस